July 28, 2006, 12:44 pm Filed under: True Feelings ကျွန်မ လင်းလက်ကြယ်စင်ကို ချတ်ရွန်းတစ်ခုက ကျွန်မလေးစားရတဲ့ လူတစ်ဦးအပြောတွေကြောင့် ဒီစာကို ရေးလိုက်မိတယ်။ ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်စတစ်ချို့ကို ကျွန်မသုတ်ရင်း မျက်လုံးတွေကို ခဏမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ မျက်ဝန်းထဲမှာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အာဏာရှင်တွေကို တစ်ယောက်ချင်း မြင်ယောင်ရင်း ထပ်မံကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကို မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး။ ရင်ထဲ တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေမိတယ်။ `ကိုယ့်စာဖတ်ပရိသတ်ကို သတ်မယ့် စာရေးသူ´လို့ စွပ်စွဲသံတွေကို ကျွန်မ တောက်တစ်ချက်ခေါက်ရင်း မနည်းပြန်ဖြေသိမ့်နေရတယ်။
July 29, 2006 @ 8:01 am Reply	ဘုရားဘုရား ဘယ်နှယ့် ကျွန်တော်က ပါလာရသလဲ မချာမင်းရဲ့။ ဘာမှလည်း မသိပါဘူး။ ချတ်ရွမ်းတွေ မရောက်တာလည်း လပေါင်းများစွာ ရှိနေပါပြီခင်ဗျ။
Comment by NLS
July 29, 2006 @ 11:24 am Reply	လူရဲ့စိတ်က ဖိလေ ပြန်ကန်လေတဲ့ စပရိန်လိုပဲအဲလိုဖိနိုပ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ လူတွေမှသာ မျှဝေခံစားတတ်ကြမယ်ထင်တယ်စနေလည်း အဲလိုနီးနီး ဖြစ်တဲ့ မိသားစုက လာခဲ့တာပါ (အဖိုး အဘွား ဦးလေး အဒေါ်တွေပါ )လင်းလက် ခံစားနေတာကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ရတယ်…
Comment by နိုင်းနိုင်းစနေ
July 29, 2006 @ 1:56 pm Reply	မလင်းလက်ကြယ်စင်…ခင်ဗျားရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်စဉ်တွေအိုတွက်စာတွေနဲ့သီကုံးလား..စာတွေအတွက်ခံစားချက်ဖြစ်စဉ် အဖြစ် ဖွဲ့နွဲ့လား..ကျွန်တော်မသိနိုင်ပါခင်ဗျာ…ဒီစာကိုဖတ်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ဒီစာလေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကနေ ကျွန်တော့် ရင်ကို ၄နေရာကနေလာမှန်ပါတယ်…ဒီ့ပြင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့…အမေသာခင်ဗျားလိုသမီးတစ်ယောက်မွေးပေးခဲ့ရင်…ကျွန်တော်ကတော့တော်တော် ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေမိမှာပါ…..
Comment by artixlin
July 29, 2006 @ 8:08 pm Reply	mama lin!
sate ma kaung par buu mama yel…nyimalay ko chin sar lo ya par dal…a nel netamyar pal kwar dar par mama yel…dlo par pal..nyimalay lae ta khar ta lay mama lo pel…ayann khan sar ya del..
July 29, 2006 @ 10:07 pm Reply	အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ် … စိတ်မပျက်ပါနဲ့ … က်ိုယ်ကောင်းသရွေ့ … ခေါင်းဘယ်တော့မှမရွေ့ပါဘူး။
August 2, 2006 @ 7:40 pm Reply	Dear Sis,
I am so impressed! Not just this post but also all other posts of yours are so genuine. This blog reflectsalot of other un-heard surpressed voices.You are braver than me. You are selfless. You have no Fear. I am almost twice as old as you but I solute you today.
Comment by Myanmar Blues
August 9, 2006 @ 5:54 am Reply	Dear sis Lin..,
I am so impressed..When I read this post,I really feel sth..Same case as u,since I was young,my childhood also like that..Until now they wanna control of my life..I really solute u..Bravo sis,so keep it up the good job..I will always be there for u..u can count on me no matter what..
Yr always sis,Moe KyaL ^_^
Comment by mOe kYaL
August 9, 2006 @ 5:45 pm Reply	ဟန်နီ
အိပ်မပျော်တာနှင့် ဘလော့တွေ ၀င်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်တစ်ခု ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ လောကဓံ ရဲ့ အထု အထောင်းအရိုက်အပုတ်တွေကြားက လှိုင်းလေ ထန်နေတဲ့ ဘ၀ ပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အဖြစ်က ရင်ထဲ ထိရှသွားခဲ့တယ်။
ပညာရှိ အမျက် မပြင်မထွက်နဲ့ ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ အပေါ် အရမ်းတွယ်တာလွန်းရင်လည်းမကောင်းသလို အရမ်း ဝေးနေ ရင်လည်းမကောင်းဘူး။ချစ်လွန်း မုန်းလွန်းရင် စိတ်မှာ အနာ တရ ဖြစ်တတ်တယ်။ မလျော့ မတင်း စောင်းကြိုးညှင်း ဆိုတာ ဘုရားဟောတဲ့ အလယ်အလတ်ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွလွန်းခြင်း၊နိမ့်ကျလွန်းခြင်းဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်။ အဲဒါကို ထ်ိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းက ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ စိတ်တနုပသ်သနာ သတိပဌာန်ပဲ။ ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရဲ့ စာအုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် တရားတွေ အချိန်ရ ရင် နည်းနည်းချင်းနာယူပြီး စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု သင်ယူပါ လို့ အကြံပေး လိုက်ပါတယ်။
September 23, 2006 @ 9:31 pm Reply	Now, I have more understanding to u….
Comment by khayayphyu
February 23, 2007 @ 7:05 am Reply	အခုမှထပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောတာမို့ အရူးထတယ်လို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့နော် .. လင်းက အရင်က ကိုယ့်ဘလော့ခ်ကိုယ် ကွန်မန့်ပြန်ရေးရတာ တစ်မျိုးကြီးမို့ ပြန်မရေးခဲ့မိဘူး .. အားပေးတဲ့ အကိုတွေ အမတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … အခုအချိန်မှာ ရင်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ တည်ငြိမ်သွားခဲ့ပါပြီ .. ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ စေခိုင်းခိုင်း ၊ ဘာတွေပဲဖြစ်လာလာခဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကို အကုန်လုံး လိုက်ပြောင်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သွင်းထားလိုက်ပါတော့တယ် ….
February 26, 2007 @ 10:51 am Reply	ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပြန်ဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ.. အများကြီးကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ညီမရေ… အမေစုဘာသာပြန်ထားတဲ့ KIPLIN ရဲ့ IF ကဗျာလေးသာ ဖတ်ပြီး အားပြန်ဖြည့်လိုက်ပါနော်
Comment by Khunmyahlaing
July 10, 2007 @ 4:02 am Reply	i do have the same situation..the result is i turn out into Gothic and against everyone..
December 30, 2007 @ 8:45 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI